Esikhathini sethu phakathi odokotela, odokotela bengqondo nabantu abavamile abangenalo maqondana imithi, njalo uhamba mpikiswano mayelana nokuthi iyiphi androgyny. Lolu hlobo webumbacambili, okungase ukuzibonakalisa ekubukekeni, ekuziphatheni, ngokwemvelo futhi kwezinye izici eziningi zokuphila komuntu. Yiqiniso, e ngokwezinga layo ngokugcwele le mfanelo akuyona nobuntu ngamunye wethu, kodwa ngokuvamile siqaphela phakathi kwabo isimiso esithile, okuyinto akuhlangene ne phansi wanikezwa ngokwemvelo.
Babunjani esezelwe eside
Androgyny - umzimba ngithanda abesilisa nabesifazane, umphefumulo, ukuziphatha kwabantu. Lona umuzwa lapho emzimbeni munye kukhona ezimbili nje temusho, bahluke, kodwa ikhono umphelelisi nomunye futhi co-ezikhona ndawonye. Yilokhu ngamunye singafunda Imininingwane lasendulo ebhaliwe, okuyinto okungcono amaGreki asendulo. Mayelana ngokobulili webumbacambili indoda yatshela Zabaphostoli oNgcwele, abaye etshaliwe yomshikashika wabo ngokubhala iBhayibheli. Nokho, emazwini kungani into efana "abantu-androgynous" yavela kuphela uma Psychology waba isayensi ezimele okhokho bethu ngezinye izikhathi kunzima kakhulu ukuyiqonda,. Kwaba Carl Gustav Jung akuniké zomphakathi umqondo wokuthi izici ubunjalo amadoda zihluke zabesifazane. Ukulandelela, yiziphi izimfanelo umuntu Ngaphezu kwalokho, singaba kutholakale umsuka wendaba yesihluku androgyny yakhe. Ukuyibeka ngamanye amagama, ungakwazi ukuqonda indlela "wesilisa" uhlamvu kungaba owesifazane othile, noHezekeli.
Imithetho eyisisekelo ubuntu webumbacambili
Namuhla kakade androgyny - kuyinto ephelele umqondo ngokomqondo, nokwagcina kusekelwe imithetho ehambisana ngqo nensiza. Elokuqala lalawo yakhiwa bipolarity kobuntu, umbandela ngamunye okubhekisele isikhundla evelele. Lokho, umuntu oyedwa izici ifakwe kokubili iduna nensikazi, kungakhathaliseki ukuthi ubulili bakhe "begazi". Ngokuvamile, ubunikazi kobulili okungokwemvelo kuvumelana ezingokwengqondo, kulokho kukhona zinto ezifana "owesifazane ejwayelekile" (isibonelo, ubulili fair bakhatsateka ngokubukeka kwabo, kungakhathaliseki ukuthi elomile olukhuni futhi kwaba ngokwemvelo yabo). Nokho, uma umzimba female ubuswa nenqubo "zabesilisa" zokuziphatha noma uyasibona isimo sezwe okwakufanele ayenze nsizwa, kungcono kuwuphawu androgyny ungubani, okuyinto Yiqiniso, futhi osezithola ukubukeka komuntu.
Ukuthuthukisa ubuntu androgynous
A inqubo efanayo has kwaqala Yiqiniso, izimfanelo ezingokomoya. Ekuqaleni kwakhiwa umhlaba komuntu, uhlobo yakhe yokuziphatha, imikhuba, imikhuba. Uma usengumfana oweve eshumini nambili ekuziphatheni kwakhe kubonisa ezinye izici isifazane, ukunakwa kuyadingeka ukuze banake futhi ukubonakala kwakhe. Ngokuvamile, umkhuba efanayo ukubukeka androgynous lapho izici zobuso, futhi ngezinye izikhathi ukuthi sibalo, ngesikhathi esifanayo kubonakale ukuba kokubili iduna nensikazi. Njengoba Bathi, konke emvelweni kuyalingana, ngakho ayikho into isimanga yokuthi le nsizwa esemncane, kokuba ukubukeka ngokwanele isifazane, futhi kancane kancane iba uhlamvu buthaka. Nokho, kuwufanele ukukhumbula ukuthi lokhu akulona uphawu disorientation ngokobulili njengoba androgynous - okungukuthi, njengoba umthetho, maphakathi, noma ezimweni ezibucayi,-aspect ngokocansi it ukhetha ngokushesha kokubili abafana namantombazane.
Ungabheka kanjani androgynous empilweni yangempela
Leso simangaliso yezinto eziphilayo androgyny - ngokuyinhloko emsebenzini ongokomoya nzima kumuntu kuba eyinqaba. Iqiniso lokuthi umuntu, ngakho ukukusho, i ukubukeka Ngokwesilinganiso, kulinganisa phakathi kwabesilisa nabesifazane, kanye uhlamvu efanayo futhi ukuziphatha, kumele ukhethe ukuthi yini nakakhulu kuye. Futhi lokhu kukhetha zingenziwa yini esivuna ubulili begazi, Isimanga siwukuthi, nakuba ukukhetha olala nabo ungumuntu kungaba ezinjalo zemvelo kakhulu. Vele ngezinye izikhathi umuntu Ingaphandle zazo ubuswa ezithambile izici sici ubulili bubuhle, kuba lula ngabanye ukuba intombazane, kodwa enhliziyweni yami ukuba umnumzana kweqiniso.
Ukuhlolisisa ezijulile mbono
In ngamunye kithi kukhona i inkhulumomphendvulwano yangaphakathi, okungaba olinganiselayo noma kuyaphikisana, ngisho kancane ihlazo. Lezi "podlichnosti" ezimbili, noma kunjalo, zihlukaniswe evelele futhi ungaphansi, noma nguye ezingeni ngokujulile, zingakwazi ukufunda bezibona ukhishwa inyumbazane. Ake sicabangele ku isibonelo sendlela wabonakaliswa abesifazane androgynous. Ngo abesifazane lanamuhla "Uyinhloboni ethambile kakhulu futhi usentekenteke," njengokungathi kweqiniso yabo, ngokuvamile kuthatha iyona isikhundla ongaphansi, efihlekile ekujuleni umphefumulo. isikhundla evelele has a imvelo eqinile, okuyinto engase ifaniswe amadoda. Ngenxa yalokho, ummeleli zanamuhla wobulili namandla kungase kubonakale uyashoda ucobekile, njengoba libhekene ehola podlichnost nenqubo zesifazane. Kodwa enganakile yakhe - ngaleyo ndlela uhluke lokhu, abuyiselwe ibhalansi. Ngesisekelo le esele abantu wobulili obuhlukile bakhangwa nomunye, kungakhathaliseki ukuthi ukubukeka banayo futhi yini izici basuke kabanzi athuthukile.
Indlela ukwamukela wena oyikho?
Ngokuvamile, ngisho esikhathini sethu, umuntu nge "srednepoloy" ukubukeka, onemibuzo, ukuklolodelwa nokuhleba emphakathini. Kulokhu, ukunakekelwa okufanele zikhokhelwe onobuhle odumile kakhulu, okuyinto nje enjalo izici ukubukeka, ngokuhambisa ngesikhathi esifanayo hhayi kuphela nesembozo omagazini, kodwa futhi izinhliziyo abalandeli. Kuze kube manje, omunye elidume kunawo wonke androgynous Andrey Pezhich, ongowokuzalwa e-Australia, lapho has a izimpande Serbian futhi Croatian. Ukuba umuntu omude, futhi nokuba ne-sibalo lokugijima ebusweni kubukeka ngendlela emangalisayo isifazane futhi emnene. Ngokuphindaphindiwe ephuma njengesibonelo esezingeni yesikhulumi ukuze ukwethula omunye ngobuciko omunye abaklami zomhlaba. Futhi kufanele kuthiwe u-Andrew uthembele wabonisa iqoqo besifazane njalo. Phakathi onobuhle androgynous kukhona amantombazane, kunalokho, abe ukubukeka boyish ezinhle futhi ngezinye izikhathi ngisho sibalo.
Ukusiza bonke beze isithombe androgynous
Ukuze ukwazi ukubona imvelo waso, owayeyisikhulu propensity zokuziphatha ukuze wobulili obuthile, udinga uzame ngokwakho izindima ezahlukene. Thina lapha asikhulumi ngama-eyohlinzwa elikuvumela ukushintsha phansi, kodwa kuphela mayelana isitayela, okuyinto kubonakala izinwele, futhi yebo, endleleni yabantu yokuziphatha. Kwesinye isikhathi amantombazane ungakhululeki kuleli zwe, lapho okungabukeki tente ezimpilweni zabo siqu, ukushintsha ukubukeka kwabo futhi ngokushesha ngcono. Ikakhulukazi, sikhuluma haircut iDemo, izingubo agodliwe ngaphezulu. Esikhathini ikhabethe kufanele enqoba ibhulukwe izikhindi, hhayi iziketi. Kodwa kuwufanele ukukhumbula ukuthi lezi zinto kufanele kube njengabesifazane, okungenani ngo evumelanisa yayo. Man, kunalokho, ngeke ilunge ukuthi iyishaye ukhule izinwele ezinde, wagqoka izingubo "unisex" isitayela ukugqoka umhlobiso efanelekayo. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi njengazo zonke namanje akusebenzi, futhi ngesikhathi esifanayo ukucindezela bazikhohlwe noma kunjalo engenakwenzeka. Ngakho-ke, ngo-kwindlela uzizwa ukhululekile, cishe ungathola izindawo othile obani abayohlanganyela ekumemezeleni ukuthi ukubuka kwakho izwe nasesimweni sengqondo ngokuphila.
Wazi kanjani ukuthi ukhona androgynous?
Isazi sokusebenza kwengqondo American Sandra Bem isungule wonke umbono phakathi nekhulu leminyaka eledlule, indlela kusungulwe wobulili womuntu futhi lokhu uhlamvu kunqunywa. Uma ufuna ukwazi ukuthi iyiphi iqembu labantu ningabakaKristu, wena bephumelela kulolo vivinyo, it wadala, esakhiwa eziningi izinkinga, elula futhi kuyaqondakala wonke umuntu. Ngenxa yalokho, iphesenti sizokwazi ukubala, yini izici emvelweni yakho ngaphezulu - abesilisa nabesifazane, futhi ngokwaleli ukwakha ukuphila kwabo kwesikhathi esizayo, ukufuna isitayela ayo nabantu eziyokhanga ukubukeka kwakho androgynous, okuyinto uyokusekela, baqonde futhi ukwabelana izinto eziza kuqala kuwe nokubukwa.
Iyini imfihlakalo Sphinx?